मनोरञ्जन – Page 75 – BIG FM 101.2 MHz
Home » मनोरञ्जन (page 75)
कस्तो होला परेड खेल्ने पुन्टे ?
काठमाडौं, ११ जेठ / चलचित्र ‘पुन्टे परेड’को फष्टलुक सार्वजनिक भएको छ । काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सिनेमाको फष्टलुक सार्वजनिक गर्दै निर्माणपक्षले प्रदर्शन मिति पनि घोषणा गरेको हो । साउन २ गतेबाट यो सिनेमा दर्शना आर्टसको वितरणमा देशभर लाग्नेछ । ‘आवरण’ निर्देशक सुवास कोइराला यसका क्याप्टेन हुन् । हरी महत्तको निर्माणमा तयार भएको यो सिनेमाले प्लस २ पढ्ने विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानलाई …
राजेश र मधुको दाम्पत्य जीवन, शुभकामना
काठमाडौं, १0 जेठ/ अभिनेता राजेश हमालले प्रेमिका मधु भट्टराईको सिउँदो सजाएका छन् । अन्नपूर्ण होटलको गेटमा करिब ३ घन्टा कुरेपछि नायक राजेश हमालले आफ्नो बिहेको तस्बिर मिडियालाई खिच्न अनुमति दिए । तर अन्नपूर्ण होटलको कुमारी हलमा संचारकर्मी पुग्दा बिहे लगभग सकिएको थियो । हमाल र मधु मिडियाको अघि मिठो मुस्कानसहित उभिएका थिए । क्यामेरामा विभिन्न पोजका तस्बीर कैद भएपछि हमाल …
जीवन र रेखा उत्कृष्ट : तुलसीलाई `लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड`
काठमाण्डौ, ४ जेठ राष्ट्रिय बक्स अफिस फिल्म अवार्डमा ‘रिदम’ ले उत्कृष्ट फिल्मले अवार्ड पाएको छ । ‘रिदम’ बाटै विकास आचार्यले उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पाए भने सोही फिल्मबाट जीवन लुइँटेल उत्कृष्ट अभिनेता ठहरिए । रेखा थापाले पव्लिक च्वाइस सहित ‘काली’ फिल्मबाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड उचालिन् । उत्कृष्ट नव निर्देशकको हकदार ‘मोक्ष’ फिल्मका प्रविन श्रेष्ठ बने । ‘विन्दास २’को ‘सुन्छु तिमीले मलाई’ …
‘शहर’ को सुटिङ सकियो, जेठ ३१ देखि सार्वजनिक हुने
पोखरा, ४ जेष्ठ । फलानो क्रियशनले निर्माण गरेको टि.भी फिल्म ‘शहर’ को सुटिङ सकिएको छ । सटिङ सगै सम्पादन कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । साढे दुई महिनामा सुटिङ सकिएको ‘शहर’ को प्रसारण मिती समेत सार्वजनिक गरीएको छ । टि.भी फिल्म ‘शहर’ यहि जेठ ३१ गते देखी हरेक शनिबार राती पौने नौ बजे गण्डकी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरीने फलानो …
नेपालमा जस्तो नेचुरल ब्युटी अन्यत्र पाइँदैन: अक्षयकुमार
पुरानो दिल्लीको प्रसिद्ध चाँदनी चौकको पराठेवाली गल्लीमा ९ सेप्टेम्बर १९६७ मा जन्मिएका राजीव हरिओम भाटियाले बलिउडका चलचित्र अभिनेता अक्षयकुमारका रूपमा रूपान्तरण हुन ठूलो संघर्ष गरेका छन्। जीवनको प्रारम्भिक कालमा आफ्नै गल्लीमा खाना बनाएर बिक्री गर्ने हिन्दु धर्मालम्बी पञ्जावी युवक राजीव भाटिया अवसरको खोजीमा थाइल्यान्डको बैंकक हान्निएका थिए। त्यहाँ उनले विभिन्न होटलमा कुकका रूपमा काम गर्दागर्दै थाइल्यान्डको प्रसिद्ध ‘किक बक्सिङ’ नामक …
७४ बर्षका पूर्व आइजीपीसँग बिहे गर्दै मिथिला शर्मा
५० बर्षको उमेरमा आएपछि चर्चित कलाकार मिथिला शर्माले बिबाह बन्धनमा बाँधिने निर्णय गरेकी छिन् । चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री एवं नृत्यांगना मिथिला शर्माले बिहे गर्न लागेका पुरुष को होलान् भन्ने खुलदुली पनि धेरैलाई हुनसक्छ । उनले पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक मोतीलाल बोहरासँग बिहे गर्न लागेको आज प्रकाशित ‘नेपाल साप्ताहिक’ले उल्लेख गरेको छ । मिथिलाले यसै बर्ष भित्रमा नै बिहे गर्ने बताएकी छिन् । …
पोखरामा नेपाली फिल्म ‘धुन’को सुटिङ शुरु
रेम बिक, पोखरा, १७ बैशाख । विहिबार पोखरामा नेपाली फिल्म ‘धुन’को शुभमुर्हत भएको छ । वाराहि मन्दिरमा शुभ मुर्हत गर्दै निर्माण टोलीले विहिबार बाटै फिल्मको सुटिङ गरेको जानकारी दिएको छ । साँगीतिक फिल्म ‘धुन’को शुभमुर्हतमा निता ढुंगाना र मुकेश ढकालले सट दिएका थिए । मुर्हतको क्रममा पत्रकार शिव शर्माले नरिवल फोडे भने वितरक केदार पराजुलीले क्ल्याप ठोके । फिल्मलाई कृष्ण …
बन्ने भो `नाईं नभन्नू ल ३`
काठमाण्डौ, वैशाख १४, ‘नाईं नभन्नू ल २’ पछि अब ‘नाईं नभन्नू ल ३’ निर्माण हुने भएको छ । विकास आचार्यले ‘नाईं नभन्नू ल ३’ निर्माण हुने फिल्मीखबर मार्फत घोषणा गरे । ‘नाईं नभन्नू ल ३’ मा बाल कलाकार अनुभव रेग्मी र सुज्ञानी भट्टाईको शिर्ष भूमिका रहनेछ । अनुभव र सुज्ञानी बाहेक ‘नाईं नभन्नू ३’का अन्य कलाकार पक्का भैसकेका छैनन् । स्क्रिप्टको …
नरिसाउ न डार्लिङ, मापसेले मार्‍यो !
काठमाडौं । महानगरिय ट्राफीक कार्यालयका प्रमुख डिआइजी केशबप्रसाद अधिकारी कमलपोखरीस्थित ड्रिम्स स्टुडियो पुगे । स्टुडियोको भ्वाइस रेकर्ड गर्ने कक्षमा गएर उनले नरीवल फुटाले । धुप बत्ती बालेर पुजा पनि गरे । त्यसरी डिआजी अधिकारीले मादक पदार्थ सेवन गर्न नहुने सन्देश बोकेको गितको शुभ रेकर्ड शुभारम्भ गरे । डिआइजी अधिकारीले नरिबल फुटाल्नासाथ गायक रामजी खाँड र पुर्ण बला बिसीले मापसे विरोधी …
‘कबड्डी’को प्रचार गर्दै निर्माण यूनिट पोखरामा
पोखरा, ८ बैशाख /देश दौडाहाको क्रममा नेपाली फिल्म ‘कबड्डी’को टोली शनिबार पोखरा आईपुगेको छ । फिल्मको मुख्य पात्र दयाहाङ राई सहित निर्देशक रामबाबु गुरुङ र नायिका रिश्मा गुरुङले शनिबार पोखराका संचारकर्मीहरुसंग भेटघाट गरे । बिन्दबासिनी चलचित्र भवनमा भएको भेटघाटको क्रममा उनीहरुले संचारकर्मीहरुलाई फिल्मको बारेमा जानकारी गराएका थिए । दौडाहाको क्रममा पोखरा आईपुगेको टोलीले दिएको जानकारी अनुसार ‘कबड्डी’ एउटा कमेडी फिल्म हो …